संयुक्त राष्ट्र महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेल्सन मण्डेला वार्षिक व्याख्यान २०२० - शान्ति शिक्षाको लागि विश्वव्यापी अभियान
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले १ New औं नेल्सन मण्डेला वार्षिक व्याख्यान न्यू योर्क शहरबाट वितरण गरे। (फोटो: नेल्सन मण्डेला फाउन्डेशन)
(बाट पोस्ट गरिएको: नेल्सन मण्डेला फाउन्डेशन, जुलाई १ 18, २०२०)
सम्पादकहरूको परिचय। गुटरेसले प्रस्ताव गरेको नयाँ सामाजिक अनुबन्ध र "शक्ति, धन र अवसरहरूको पुनः वितरण" को आवश्यकता रहेको ग्लोबल नयाँ सम्झौताको अनुसरण गर्न हाम्रो अन्य पदहरूको सम्झना दिलाउने छ कोरोना जडानहरू श्रृंखला "नयाँ सामान्य" को लागि कल गर्दै। महासचिवले सुझाव दिए कि "विश्वव्यापी शासनका लागि नया मोडेल विश्वव्यापी संस्थाहरुमा पूर्ण, समावेशी र समान सहभागितामा आधारित हुनुपर्दछ।" हामी गुटरेसको नेतृत्वको अनुसरण गर्न र मानवीय विश्वव्यापी शासनको सम्भावनाहरूको थप अन्वेषण गर्न सोधपूछ विकास गर्न शान्ति शिक्षकहरूलाई हौसला दिन्छौं।
यो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेल्सन मण्डेला वार्षिक व्याख्यान २०२० को भाषणको पूर्ण प्रतिलेख हो। नेल्सन मण्डेला वार्षिक व्याख्यान श्रृंखला, को एक पहल नेल्सन मण्डेला फाउन्डेशन, महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दाहरूमा बहस गर्न आमन्त्रित गर्दछ।
असमानता महामारीको सामना गर्दै: नयाँ युगको लागि नयाँ सामाजिक अनुबन्ध
न्यू योर्क, १ July जुलाई २०२०
महामहिमहरू, प्रतिष्ठित पाहुनाहरू, साथीहरू,
तपाईंसँग नेल्सन मण्डेला, एक असाधारण विश्वव्यापी नेता, अधिवक्ता, र आदर्श मोडेललाई सम्मान गर्नमा भाग लिन पाउनु ठूलो सुअवसर हो।
म यस अवसरको लागि नेल्सन मण्डेला फाउन्डेसनलाई धन्यवाद दिन्छु र उनको जीवनलाई निरन्तरता दिनको लागि उनीहरूको कार्यको सराहना गर्दछु। र यस हप्ताको सुरुमा राजदूत जिन्ड्डी मंडेलाको असामयिक निधनमा मण्डेला परिवार र सरकार र दक्षिण अफ्रिकाका जनतालाई गहिरो संवेदना पठाउँछु। उनी शान्तिमा बस्न सकून्।
म धेरै भाग्यशाली थिए नेल्सन मन्डेलालाई धेरै चोटि भेट्न। म उनको बुद्धिमत्ता, दृढ संकल्प र अनुकम्पालाई कहिल्यै भुल्दिन, जुन उसले भनेका र गरेका सबै कुरामा देखा पर्यो।
गत अगस्टमा, छुट्टिमा म रोबेन टापुमा माडिबाको सेलमा गएँ। म त्यहाँ उभिरहेको थिएँ, बारहरूमा हेर्दै, उनको विशाल मानसिक शक्ति र अकल्पनीय साहसले फेरि नम्र तुल्यायो। नेल्सन मण्डेलाले २ 27 वर्ष जेलमा बिताए, जसमध्ये १ 18 रोबेन टापुमा थिए। तर उनले यो अनुभवलाई उनी वा उसको जीवनलाई परिभाषित गर्न कहिल्यै अनुमति दिएनन्।
नेल्सन मण्डेला आफ्नो जेलरहरु भन्दा माथि उठे लाखौं दक्षिण अफ्रिकीहरु स्वतन्त्र र एक वैश्विक प्रेरणा र एक आधुनिक प्रतिमा बन्न।
उनले असमानताको विरुद्ध लड्न आफ्नो जीवन समर्पित गरे जुन हालैका दशकहरूमा विश्वभरि स crisis्कटको अनुपातमा पुगेको छ - र त्यसले हाम्रो भविष्यलाई बढ्दो खतरा बनाएको छ।
COVID-१ this यो अन्यायमा एक रोशनी चम्किरहेको छ।
आज, मदिबाको जन्मदिन मा, म कसरी उनीहरूले हाम्रो अर्थतन्त्र र समाजहरुलाई नष्ट गर्नु भन्दा पहिले असमानताको धेरै परस्पर सुदृढ स्ट्रेन्ड र तहहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्छु भनेर कुरा गर्नेछु।
संसार उथलपुथलमा छ। अर्थव्यवस्था फ्रिफलमा छन्।
हामीलाई हाम्रो घुँडामा ल्याइएको छ - एक माइक्रोस्कोपिक भाइरस द्वारा।
महामारीले हाम्रो संसारको नाजुकता प्रदर्शन गरेको छ।
यसले दशकौंसम्म बेवास्ता गरेका नक्कली जोखिमहरू रहेको छ: अपर्याप्त स्वास्थ्य प्रणालीहरू; सामाजिक सुरक्षामा अन्तरहरू; संरचनात्मक असमानता; वातावरणीय गिरावट; मौसम स crisis्कट
गरिबी उन्मूलन र असमानतालाई कम गर्ने कार्यमा प्रगति गरिरहेका सम्पूर्ण क्षेत्रहरू वर्षौं पछाडि सेट गरियो।
भाइरसले सबैभन्दा जोखिममा सबैभन्दा ठूलो जोखिम निम्त्याउँछ: ती गरिबीमा बाँचिरहेका, बुढा मानिसहरू र अशक्तता भएका मानिसहरू र पहिले अवस्थित अवस्थाहरू।
स्वास्थ्यकर्मीहरू अग्रणी रेखामा छन्, दक्षिण अफ्रिकामा मात्र ,4,000००० भन्दा बढी संक्रमित छन्। म तिनीहरूलाई श्रद्धांजलि अर्पण गर्छु।
केही देशहरूमा स्वास्थ्य असमानताहरू निजी अस्पताल मात्र होईन तर व्यवसाय र व्यक्तिविशेषले सबैका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने बहुमूल्य उपकरणहरू जम्मा गरिरहेका छन् - सार्वजनिक अस्पतालमा असमानताको एउटा दुःखद उदाहरण।
महामारीको आर्थिक नतीजाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा काम गर्नेहरूलाई असर गरिरहेको छ; सानो र मध्यम आकारका व्यवसायहरू; र हेरचाह गर्ने जिम्मेवारी भएका व्यक्तिहरू, जो मुख्यतया महिलाहरू हुन्।
दोस्रो विश्वयुद्ध पछि हामीले सबैभन्दा गहिरा विश्वव्यापी मन्दीको सामना गरिरहेका छौं, र १ 1870० देखि आयमा भएको व्यापक पतन।
एक सय करोड बढी मानिसहरूलाई चरम गरीबीमा धकेल्न सकिन्छ। हामी ऐतिहासिक अनुपातको अनिकाल देख्न सक्छौं।
COVID-१ X लाई एक्स-रेसँग तुलना गरिएको छ, हामीले निर्माण गरेका समाजहरूको नाton्गो कंकालमा फ्र्याक्चर प्रकट गर्दै।
यसले सबै ठाउँमा झूटा र झूटहरूलाई उजागर गर्दैछ:
झूट कि नि: शुल्क बजार सबै को लागी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्छ;
फिक्शन जुन कि भुक्तान गरिएको हेरचाह कार्य काम गर्दैन;
भ्रम जुन हामी उत्तर-जातिय संसारमा बस्छौं;
मिथक कि हामी सबै एकै डु boat्गामा छौं।
किनकि जब हामी सबै एकै समुन्द्रमा तैरिरहेका छौं, यो स्पष्ट छ कि हामीमध्ये कोही सुपरिचटमा छौं जबकि अरूहरू तैरिएको मलबेमा अड्किएर रहेका छन्।
असमानता हाम्रो समय परिभाषित गर्दछ।
विश्वको per० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरू बढ्दो आय र धन असमानताको साथ बाँचिरहेका छन्। विश्वका २ 70 धनी व्यक्तिहरूसँग आधा विश्वव्यापी जनसंख्या जत्तिकै सम्पत्ति छ।
तर आय, तलब र धन असमानताको मात्र उपाय छैन। जीवनमा व्यक्तिहरूको अवसरहरू तिनीहरूको लि gender्ग, परिवार र जातीय पृष्ठभूमि, जातिमा निर्भर गर्दछन् कि उनीहरूसँग अपा ,्गता छ, वा अन्य कारणहरू छन्। बहु असमानताहरू एक अर्कोलाई पुस्तामाथि भर गर्दछ र सुदृढ पार्दछ। लाखौं व्यक्तिको जीवन र अपेक्षाहरू तिनीहरूको जन्मको अवस्थामा ठूलो हदसम्म निर्धारित गर्दछन्।
यस प्रकारले, असमानताले मानव विकासको बिरूद्ध काम गर्दछ - सबैका लागि। हामी सबै यसको परिणाम भोग्छौं।
हामीलाई कहिलेकाँही बताइन्छ कि आर्थिक बृद्धिको बढ्दो ज्वारले सबै डु boats्गालाई उचाल्छ।
तर वास्तविकतामा, बढ्दो असमानताले सबै डु boats्गालाई डुबाउँछ।
असमानताको उच्च स्तर आर्थिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, वित्तीय स ,्कट, बढेको अपराध र खराब शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ।
भेदभाव, दुरुपयोग र न्यायको पहुँचको कमीले धेरै खास गरी आदिवासी जनजाति, आप्रवासी, शरणार्थी र सबै प्रकारका अल्पसंख्यकहरूका लागि असमानताको परिभाषा गर्दछ। यस्ता असमानताहरू मानव अधिकारमा प्रत्यक्ष आक्रमण हो।
यसैले असमानतालाई सम्बोधन गर्नु सामाजिक न्याय, श्रम अधिकार र लैंगिक समानताका लागि इतिहासभरि एक प्रेरक शक्ति भएको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघको सपना र वाचा भनेको खाद्य, स्वास्थ्य सेवा, पानी र सरसफाई, शिक्षा, सभ्य काम र सामाजिक सुरक्षा भनेको उनीहरूले किन्न सक्नेलाई बेच्नको लागि सामान होइन, तर आधारभूत मानव अधिकार हो जसको लागि हामी सबै हकदार छौं।
हामी प्रत्येक दिन, जताततै असमानता कम गर्न काम गर्दछौं।
विकासशील र विकसित देशहरूमा समान रूपमा, हामी व्यक्तिगत, सामाजिक र वैश्विक स्तरमा असमानतालाई प्राथमिकता दिनुहुने शक्ति गति परिवर्तन गर्न नीतिगत तरिका अपनाउँछौं र समर्थन गर्दछौं।
त्यो दर्शन आजको जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ किनकि यो 75 XNUMX वर्ष पहिले थियो।
यो स्थायी विकासका लागि २०2030० एजेन्डाको मुटु हो, स्वस्थ ग्रहमा शान्ति र समृद्धिका लागि हाम्रो सहमत ब्लुप्रिन्ट, र एसडीजी १० मा कब्जा गरियो: देशहरू बीच र असमानतालाई कम गर्नुहोस्।
COVID-१ p महामारी हुनु अघि पनि, विश्वका धेरै व्यक्तिहरूले असमानताले उनीहरूको जीवनका अवसरहरू र अवसरहरूलाई कमजोर बनाइरहेको छ भनेर बुझेका थिए।
तिनीहरूले सन्तुलन बाहिरको संसार देखे।
तिनीहरूले पछाडि छोडेको महसुस गरे।
तिनीहरूले आर्थिक नीतिहरू श्रोत थोरैको लागि स्रोतहरू माथि च्यानल देखेका थिए।
सबै महाद्वीपहरुका लाखौं मानिसहरु सडकमा उनिहरु आफ्नो आवाज सुन्न को लागी आए।
उच्च र बढ्दो असमानताहरू सामान्य कारक थिए।
दुई भर्खरको सामाजिक आन्दोलनहरु लाई खुवाउने क्रोध यथास्थिति संग एकदमै मोहभंग को प्रतिबिम्बित गर्दछ।
महिलाले जताततै लै gender्गिक असमानताको सबैभन्दा गम्भीर उदाहरणलाई समय भनेर सम्बोधन गरेको छ: महिलामाथि सशक्त पुरुषहरूले गर्ने हिंसा, जो आफ्नो कामका लागि मात्र प्रयास गरिरहेका छन्।
र जर्ज फ्लोयडको हत्या पछि संयुक्त राज्यबाट विश्वभर फैलिएको वंशविद्विरोधी आन्दोलन भनेको मानिसहरुसंग भएको कुराको अर्को चिह्न हो:
असमानता र भेदभावले मानिसलाई आफ्नो छालाको र ofको आधारमा अपराधीको रूपमा व्यवहार गर्दछ।
संरचनात्मक जातिवाद र व्यवस्थित अन्यायको पर्याप्त छ कि मानिसहरूलाई उनीहरूको मौलिक मानव अधिकार इन्कार गर्दछ।
यी आन्दोलनहरूले हाम्रो विश्वमा असमानताको दुई ऐतिहासिक स्रोतहरू औंल्याए: औपनिवेशवाद र कुलपिता।
ग्लोबल नर्थ, विशेष गरी मेरो आफ्नै महादेश युरोपले हिंसा र जबरजस्ती शताब्दियौंदेखि ग्लोबल दक्षिणमा धेरै औपनिवेशिक शासन लगायो।
उपनिवेशवादले दक्षिण अफ्रिकामा ट्रान्साटलान्टिक दास व्यापार र रंगभेद शासनको कुइरो लगायत देशहरू बीच र बीचमा ठूलो असमानता सिर्जना गर्‍यो।
दोस्रो विश्वयुद्ध पछि, संयुक्त राष्ट्रको गठन समानता र मानवीय मर्यादा वरिपरि नयाँ वैश्विक सहमतिमा आधारित थियो।
र विकर्णकरणको लहरले विश्वलाई बगायो।
तर हामी आफूलाई मूर्ख छैनौं।
उपनिवेशवादको विरासत अझै पनी प्रतिबिम्बित हुन्छ।
हामी यसलाई आर्थिक र सामाजिक अन्याय, घृणा अपराध र Xenophobia मा देख्दछौं; संस्थागत जातिवाद र सेतो वर्चस्वको दृढता।
हामी यसलाई विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीमा देख्छौं। उपनिवेश भएका अर्थव्यवस्थाहरू कच्चा माल र कम टेक सामानको उत्पादनमा बन्द हुने बढी जोखिममा छन् - औपनिवेशवादको नयाँ रूप।
र हामी यसलाई विश्वशक्ति सम्बन्धमा देख्छौं।
अफ्रिका दोहोरो शिकार भएको छ। प्रथम, उपनिवेश परियोजनाको लक्ष्यको रूपमा। दोस्रो, अफ्रिकी देशहरू अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा प्रतिनिधित्व गर्दै छन् जुन दोस्रो विश्वयुद्ध पछि सिर्जना गरिएको थियो, ती मध्ये धेरैले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नु भन्दा पहिले।
सात दशक भन्दा बढी अगाडि शीर्षमा आएका राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा शक्ति सम्बन्ध परिवर्तन गर्न आवश्यक सुधारहरूबारे सोच्न अस्वीकार गरे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउन्सिल र ब्रेटन वुड्स प्रणालीको बोर्डहरुमा गठन र मतदान अधिकार विन्दुमा रहेको मामला हो।
असमानता शीर्षबाट सुरू हुन्छ: वैश्विक संस्थाहरूमा। असमानतालाई सम्बोधन गर्न उनीहरूलाई सुधार गरेर सुरु गर्नुपर्दछ।
र हामी हाम्रो संसारमा असमानताको अर्को ठूलो स्रोत नबिर्सौं: पितृसत्ताको सहस्राब्दी।
हामी पुरुष प्रधान संस्कृतिको साथ एक पुरुष प्रधान संसारमा बस्छौं।
जताततै, महिलाहरू पुरुषहरू भन्दा खराब छन्, केवल किनकि ती महिलाहरू हुन्। असमानता र भेदभाव आदर्श हो। महिला विरुद्ध हुने हिंसा, फेमिसाइड सहित, महामारीको तहमा छ।
र विश्वव्यापी रूपमा महिलाहरूलाई अझै पनि सरकारमा र कर्पोरेट बोर्डहरूमा वरिष्ठ पदबाट वञ्चित गरिन्छ। १० टेन विश्व नेताहरु मध्ये एक भन्दा कम महिला एक महिला हुन्।
लि ine्ग असमानताले सबैलाई हानी पुर्‍याउँछ किनभने यसले हामीलाई सम्पूर्ण मानवजातिको बुद्धिमत्ता र अनुभवबाट फाइदा लिनबाट रोक्दछ।
यसैले, एक गर्व नारीवादीको रूपमा, मैले लैंगिक समानतालाई प्राथमिकतामा राखेको छु, र लै UN्गिक समानता अब संयुक्त राष्ट्रका शीर्ष रोजगारहरूमा वास्तविकता बनेको छ। म सबै प्रकारका नेताहरुलाई उही गर्न आग्रह गर्दछु। र मलाई यो घोषणा गर्न पाउँदा खुसी भयो कि दक्षिण अफ्रिकाको सिया कोलिसी संयुक्त राष्ट्र संघ र यूरोपियन युनियन स्पटलाइट इनिसमेन्टमा हाम्रो नयाँ वैश्विक राजदूत हुनुहुन्छ, जसले अन्य पुरुषहरूलाई महिला र बालिका बिरूद्ध हिंसाको वैश्विक स sc्घर्षमा लड्न मद्दत गर्दछ।
हालका दशकहरूले नयाँ तनाव र प्रवृत्ति सिर्जना गरेका छन्।
भूमण्डलीकरण र प्राविधिक परिवर्तनले आय र समृद्धिमा ठूलो लाभ उकालेको छ।
एक अरब भन्दा बढी मानिसहरू चरम गरीबीबाट सरेका छन्।
तर व्यापारको विस्तार र प्राविधिक प्रगतिले पनि आय वितरणमा अभूतपूर्व बदलावमा योगदान पुर्‍याएको छ।
१ 1980 .० र २०१ween बीचमा, विश्वको सबैभन्दा धनी १ प्रतिशतले कुल आम्दानीको २ 2016 प्रतिशत कब्जा गरे।
कम कुशल कामदारहरूले नयाँ टेक्नोलोजी, स्वचालन, निर्माणको अफशोरि and र श्रम संगठनहरूको ध्वंसको आक्रमणको सामना गर्छन्।
कर छुट, कर बचाउने र कर चोरी व्यापक छ। कर्पोरेट कर दरहरू घटेका छन्।
यसले असमानता कम गर्न सक्ने धेरै सेवाहरूमा लगानी गर्न संसाधनहरू घटाएको छ: सामाजिक संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा।
र असमानताको नयाँ पुस्ता आजको संसारमा सफल हुनको लागि आवश्यक ज्ञान र सीपहरू समेट्न आमदनी र सम्पत्ति भन्दा पर जान्छ।
गहिरो असमानता जन्म भन्दा पहिले सुरु हुन्छ, र जीवन परिभाषित गर्दछ - र प्रारम्भिक मृत्यु।
धेरै उच्च मानव विकासको देशहरूमा २०-बर्ष-उमेर भन्दा बढी 50० प्रतिशत उच्च शिक्षामा छन्। कम मानव विकासका देशहरूमा त्यो संख्या तीन प्रतिशत छ।
अझ अचम्मजनक कुरा: २० वर्ष अघि कम मानव विकास भएका देशहरूमा १ 17 प्रतिशत बच्चाहरूको मृत्यु भइसकेको छ।
भविष्यलाई हेर्दा, दुई भूकम्प परिवर्तनले २१ औं शताब्दीलाई आकार दिनेछ: मौसम संकट, र डिजिटल रूपान्तरण। दुबैले असमानतालाई अझ बढाउन सक्दछन्।
आजको टेक र नवीनता केन्द्रहरूमा भएका केही विकासहरू गम्भीर चिन्ताको लागि हो।
भारी पुरुष शासित प्रविधि उद्योग आधा विश्वको विशेषज्ञता र दृष्टिकोणमा मात्र हराइरहेको छ। यसले एल्गोरिदमहरू पनि प्रयोग गरिरहेको छ जसले लिंग र जातीय भेदभावलाई थप समेट्न सक्छ।
डिजिटल विभाजनले सामाजिक र आर्थिक विभाजनलाई सुदृढ गर्दछ, साक्षरता देखि स्वास्थ्य सेवा, शहरी देखि ग्रामीण, बालवाडीदेखि कलेजसम्म।
२०१० मा, विकसित देशहरूमा 2019 87 प्रतिशत मानिसहरूले इन्टरनेट प्रयोग गरे, जबकि कम विकसित देशहरूमा १ percent प्रतिशतको तुलनामा।
हामी दुई गतिको विश्वको खतरामा छौं।
उही समयमा, २०2050० सम्ममा, जलवायु परिवर्तनको गतिले कुपोषण, मलेरिया र अन्य रोगहरू, प्रवास, र चरम मौसम घटनाहरू मार्फत लाखौं मानिसहरूलाई असर गर्नेछ।
यसले अन्तर-पुस्ता समानता र न्यायका लागि गम्भीर खतराहरू सिर्जना गर्दछ। आजका युवा जलवायु प्रदर्शनकर्ताहरू असमानता विरूद्ध लड्नका लागि अग्रबिन्दुमा छन्।
जलवायु अवरोधबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देशहरूले विश्वव्यापी तताउनेमा कम योगदान गरे।
हरित अर्थव्यवस्था समृद्धि र रोजगारीको नयाँ स्रोत हुनेछ। तर यो नबिर्सनुहोस् कि केहि व्यक्तिले आफ्नो जागिर गुमाउनेछ, विशेष गरी हाम्रो विश्वको उत्तरोत्तर औद्योगिक रस्टबेल्टमा।
र यसैले हामी केवल मौसम कार्यका लागि मात्र नभई जलवायु न्यायका लागि आह्वान गर्दछौं।
राजनैतिक नेताहरूले आफ्नो महत्वाकांक्षा बढाउनु पर्छ, व्यवसायले तिनीहरूको ठाँउ बढाउनुपर्दछ, र सबै ठाउँका मानिसहरूले आवाज उठाउनुपर्दछ। त्यहाँ उत्तम मार्ग छ, र हामीले त्यसलाई लिनै पर्छ।
असमानताको आजको स्तरको संक्षारक प्रभावहरू स्पष्ट छन्। हामीलाई कहिलेकाँही भनिन्छ कि बढ्दो…
संस्था र नेताहरुमा विश्वास कम हुँदैछ। १ 10 1990 ० को दशकको शुरूदेखि मतदाताले विश्वव्यापी औसत १० प्रतिशतले गिरावट आएको छ।
र हाशिएला भएका व्यक्तिहरू तर्कमा कमजोर छन जसले उनीहरूको दुर्भाग्यलाई अरूलाई दोष दिन्छन्, विशेष गरी तिनीहरू जसले बेवास्ता गर्छन् वा व्यवहार गर्दछन्।
तर लोकतन्त्र, राष्ट्रवाद, चरमपन्थवाद, जातिय भेदभाव र स्केपगोइ communities्ग समुदायले समुदाय र समुदाय बीच नयाँ असमानता र विभाजन मात्र सिर्जना गर्दछ; देशहरू बीच, जातिहरूको बीचमा, धर्महरू बीच।
COVID-19 एक मानव त्रासदी हो। तर यसले एक पुस्ता अवसर पनि सिर्जना गरेको छ।
एक अधिक समान र दिगो संसार फिर्ता निर्माण गर्ने अवसर।
महामारी, र यो भन्दा पहिले व्यापक असन्तुष्टि प्रति प्रतिक्रिया, एक नयाँ सामाजिक अनुबन्ध र सबैलाई समान अवसरहरू सिर्जना गर्ने नयाँ ग्लोबल डिलमा आधारित हुनुपर्दछ, र सबैको अधिकार र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुहोस्।
यो एकमात्र तरीका हो कि हामी २०2030० सालको दिगो विकासका लागि एजेन्डा, पेरिस सम्झौता र एडिस अबाबा एक्शन एजेन्डाका लक्ष्यहरू भेट्दछौं, सम्झौताहरू जुन सम्भवतः स्पष्ट रूपमा असफलताहरूलाई सम्बोधन गर्दछ जुन महामारीबाट उजागर र शोषण भइरहेको छ।
एउटा नयाँ सामाजिक अनुबन्धले युवा मानिसहरूलाई मर्यादामा रहनको लागि सक्षम गर्दछ; महिलाले पुरुष जत्तिकै संभावना र अवसरहरू सुनिश्चित गर्नेछन्; र बिमार, कमजोर, र सबै प्रकारको अल्पसंख्यकहरूको रक्षा गर्दछ।
सस्टेनेबल विकास र पेरिस सम्झौताको लागि २०2030० एजेन्डा अगाडि देखाउँदछ। १ S दिगो विकास लक्ष्यहरूले महास .्घ द्वारा उजागर र शोषण भइरहेका असफलताहरूलाई ठीक रूपमा सम्बोधन गर्दछ।
शिक्षा र डिजिटल टेक्नोलोजी दुई ठूलो सक्षम र बराबर हुनु पर्छ।
नेल्सन मण्डेलाले भने जस्तै, र म भन्छु, "शिक्षा सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो जुन हामीले संसार परिवर्तन गर्न प्रयोग गर्न सक्दछौं।" सधैं जस्तो, उनले यो पहिले भने।
शिक्षा संसारलाई परिवर्तन गर्न प्रयोग गर्न सक्ने सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो
सरकारहरूले समान पहुँचलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ, प्रारम्भिक शिक्षाबाट आजीवन शिक्षा सम्म।
न्यूरो साइंसले हामीलाई भन्छ कि प्रि-स्कूल शिक्षाले व्यक्तिको जीवन परिवर्तन गर्दछ र समुदाय र समाजमा ठूलो लाभ ल्याउँछ।
त्यसोभए जब सबैभन्दा धनी बच्चाहरू पूर्व-स्कूल जानको लागि सबैभन्दा गरीबको तुलनामा सात गुणा बढी हुन्छन्, यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन कि असमानता अन्तर-पुस्ताक हो।
सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न, हामीले २०-० सम्ममा एक वर्षमा-tr ट्रिलियन डलर कम र मध्यम आय भएका देशहरूमा दुई गुणा शिक्षा खर्च गर्न आवश्यक छ।
एक पुस्ता भित्र, कम र मध्यम आय भएका देशहरूमा सबै बच्चाहरू सबै तहमा गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच गर्न सक्दछन्।
यो सम्भव छ। हामीले भर्खर यो गर्न निर्णय गर्नुपर्दछ।
र टेक्नोलोजीले हाम्रो विश्वलाई रूपान्तरण गर्ने क्रममा तथ्यहरू र सीपहरू पर्याप्त छैनन्। सरकारहरूले डिजिटल साक्षरता र पूर्वाधारमा लगानीलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
कसरी सिक्ने सिक्ने, अनुकूलन गर्ने र नयाँ सीपहरू लिनु आवश्यक हुनेछ।
डिजिटल क्रान्ति र कृत्रिम बुद्धिमत्ताले कामको प्रकृतिलाई परिवर्तन गर्दछ, र काम, फुर्सत र अन्य गतिविधिहरूको बीचको सम्बन्ध, जसमध्ये केही हामी कल्पनासमेत गर्न सक्दैनौं।
गत महिना संयुक्त राष्ट्रसंघमा शुरू गरिएको डिजिटल सहयोगका लागि रोडमैपले २० 2030० सम्म बाँकी four अर्ब जनतालाई इन्टरनेटमा जोड्दै समावेशी, दिगो डिजिटल भविष्यको सपनालाई प्रोत्साहित गर्छ।
संयुक्त राष्ट्र संघले पनि "गीगा" सुरू गरेको छ, यो महत्वाकांक्षी परियोजना हो कि विश्वका हरेक स्कूलहरु अनलाइन हुन्छन्।
टेक्नोलोजीले COVID-19 बाट प्राप्त रिकभरी र टिकाऊ विकास लक्ष्यको उपलब्धिलाई टर्बोचार्ज गर्न सक्छ।
व्यक्ति, संस्था र नेताहरू बीचको विश्वासमा बढ्दो अन्तरले हामी सबैलाई धम्की दिन्छ।
व्यक्ति सामाजिक र आर्थिक प्रणाली चाहन्छ जुन सबैको लागि काम गर्दछ। तिनीहरू आफ्नो मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न चाहन्छन्। तिनीहरू निर्णयहरूमा एक भनाइ चाहन्छन् जसले उनीहरूको जीवनलाई असर गर्दछ।
सरकार, व्यक्ति, नागरिक समाज, व्यवसाय र अधिक बीच नयाँ सामाजिक सम्झौता रोजगार, दिगो विकास र सामाजिक सुरक्षा सबैको समान अधिकार र अवसरहरूको आधारमा एकीकृत हुनै पर्छ।
श्रमिक बजार नीतिहरू, रोजगारदाता र श्रम प्रतिनिधिहरू बीच रचनात्मक संवादको साथ, भुक्तानी र काम गर्ने अवस्थामा सुधार गर्न सक्दछ।
टेक्नोलोजी र संरचनात्मक रूपान्तरण द्वारा रोजगारीमा आउने चुनौतिहरु लाई व्यवस्थित गर्न श्रम प्रतिनिधित्व पनि महत्वपूर्ण छ - हरियो अर्थतन्त्रमा संक्रमण सहित।
मजदुर आन्दोलनको असमानतासँग लड्न र सबैको अधिकार र मर्यादाको लागि काम गर्ने गौरवको इतिहास छ।
सामाजिक सुरक्षा फ्रेमवर्कमा अनौपचारिक क्षेत्रको क्रमिक एकीकरण आवश्यक छ।
एक परिवर्तित विश्वलाई नयाँ सुरक्षा जालहरूको साथ सामाजिक सुरक्षा नीतिहरूको नयाँ पुस्ता चाहिन्छ, युनिभर्सल हेल्थ कभरेज र युनिभर्सल बेसिक इनकमको सम्भावना सहित।
न्यूनतम सामाजिक सुरक्षाको स्थापना, र शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, र इन्टरनेट पहुँच सहित सार्वजनिक सेवामा दीर्घकालीन अन्वेषण उल्टाउनु आवश्यक छ।
तर एन्क्रेन्ड असमानताहरूको सामना गर्न यो पर्याप्त छैन।
हामीलाई सम्बोधन र कार्य सम्बन्धी नीतिहरू लक्षित नीतिहरू चाहिन्छ।
लि nor्ग, जाति वा जातीयतामा ऐतिहासिक असमानताहरू, जुन सामाजिक नियमहरू द्वारा प्रबल भएका छन्, लक्षित पहलहरूले मात्र उत्र्न सकिन्छ।
नयाँ सामाजिक अनुबन्धमा कर र पुनः वितरण नीतिहरूको पनि भूमिका छ। सबैजना - व्यक्ति र निगमहरू - आफ्नो उचित हिस्सा तिर्नु पर्छ।
केहि देशहरूमा त्यहाँ करका लागि स्थान छ कि जसले धनी र राम्रोसँग सम्बन्धित छ उसले राज्य र आफ्नो सँगी नागरिकबाट ठूलो फाइदा उठाएको छ भनेर बुझ्छ।
सरकारहरूले पनि कर बोझ पेरोलबाट कार्बनमा सार्नु पर्छ।
कार्बनको तुलनामा मानिस भन्दा ट्याक्स लगानी र रोजगारीमा वृद्धि हुनेछ, जबकि उत्सर्जन कम हुनेछ।
हामीले भ्रष्टाचारको दुष्ट चक्रलाई तोड्नै पर्छ, जुन दुबै कारण र असमानताको प्रभाव हो। भ्रष्टाचारले कम गर्छ र सामाजिक संरक्षणको लागि उपलब्ध कोषहरू खेर फाल्छ यसले सामाजिक मान्यता र कानूनको शासन कमजोर गर्दछ।
र भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न जवाफदेहीतामा निर्भर गर्दछ। जवाफदेहीताको ठूलो ग्यारेन्टी भनेको एक जीवन्त नागरिक समाज हो, एक स्वतन्त्र मिडिया र जिम्मेवार सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरू सहित स्वस्थ बहसलाई प्रोत्साहित गर्दछ।
यो नयाँ सामाजिक अनुबन्ध सम्भव हुनको लागि, यो एक ग्लोबल नयाँ डिलको साथ हातमा जानुपर्दछ।
तथ्यहरूको सामना गरौं। विश्वव्यापी राजनीतिक र आर्थिक प्रणालीले महत्वपूर्ण ग्लोबल सार्वजनिक सामानहरू प्रदान गरिरहेका छैनन्: सार्वजनिक स्वास्थ्य, जलवायु कार्य, दिगो विकास, शान्ति।
COVID-१ p महामारीले स्वार्थ र साझा चासोको बिचमा दुखद बिच्छेद ल्याएको छ; र शासन संरचना र नैतिक फ्रेमवर्क मा भारी खाली ठाउँ।
यी अन्तरहरू बन्द गर्न, र नयाँ सामाजिक सम्झौतालाई सम्भव बनाउनको लागि, हामीलाई एक ग्लोबल नयाँ डिल आवश्यक छ: शक्ति, धन र अवसरहरूको पुनः वितरण।
विश्वव्यापी शासनका लागि नयाँ मोडल पूर्ण, समावेशी र वैश्विक संस्थामा समान सहभागितामा आधारित हुनुपर्दछ।
त्यो बाहेक, हामी अझ व्यापक असमानता र एकतामा अन्तरहरू पनि सामना गर्दछौं - जस्तै आज हामी COVID-१ p महामारीको बिखण्डित विश्वव्यापी प्रतिक्रियामा देख्छौं।
विकसित देशहरू महामारीको सामना गर्न आफ्नै अस्तित्वमा दृढ रूपमा लगानी गरिएका छन्। तर ती विकासोन्मुख देशलाई सहयोग पुर्‍याउन सहयोग पुर्‍याउन असफल भएका छन।
एक नयाँ विश्वव्यापी सम्झौता, निष्पक्ष भूमण्डलीकरणमा आधारित, प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मर्यादामा आधारित, प्रकृतिसँग सन्तुलनमा जीवन बिताउने, भविष्यका पुस्ताहरूको अधिकारको लेखा लिने, र आर्थिक मापदण्डको सट्टा मानव मापन गरिएको सफलताको आधारमा। यसलाई परिवर्तन गर्ने उत्तम तरिका।
संयुक्त राष्ट्र स of्घको th 75 औं वार्षिकोत्सव वरिपरि विश्वव्यापी परामर्श प्रक्रियाले स्पष्ट गरेको छ कि मानिसहरू उनीहरूलाई पुर्‍याउने विश्वव्यापी शासन प्रणाली चाहन्छन्।
विकासोन्मुख देशको विश्वव्यापी निर्णय लिने क्रममा कडा आवाज हुनुपर्दछ।
हामीलाई पनि थप समावेशी र सन्तुलित बहुपक्षीय ट्रेडिंग सिस्टमको आवश्यकता छ जसले विकासोन्मुख देशहरूलाई विश्वव्यापी मूल्य श्रृंखलामा सर्न सक्षम गर्दछ।
अवैध वित्तीय प्रवाह, मनी-लन्ड्रिering र कर चोरी रोक्न आवश्यक छ। कर अस्थायी क्षेत्र अन्त्य गर्न विश्वव्यापी सहमति आवश्यक छ।
दिगो विकासका सिद्धान्तहरुलाई वित्तीय निर्णय लिने प्रक्रियामा एकीकृत गर्न हामीले सँगै काम गर्नुपर्दछ। वित्तीय बजारहरू स्रोतको प्रवाहलाई खैरो र खैरोदेखि हरियो, दिगो र न्यायसंगत सार्न पूर्ण पार्टनरहरू हुन आवश्यक छ।
Architectण वास्तुकलाको सुधार र सस्तो क्रेडिट मा पहुँच एकै दिशामा लगानी सार्न वित्तीय ठाउँ सिर्जना गर्नुपर्दछ।
नेल्सन मण्डेलाले भनेका थिए: "हाम्रो समयको चुनौती ... एउटा हो हाम्रो मानिसहरुको चेतनामा पुनर्विचार गर्नु जुन मानव ऐक्यबद्धता, एक अर्काको लागि संसारमा हुनु र अरुको माध्यमबाट हुनु हो।"
COVID-१ p महामारीले यो सन्देश पहिलेभन्दा झन् प्रबल बनाएको छ।
हामी एक अर्काका हौं।
हामी सँगै उभिन्छौं, वा हामी अलग हुन्छौं।
आज, जातीय समानताका लागि प्रदर्शनमा ... घृणायुक्त अभिव्यक्तिको बिरूद्ध अभियानहरुमा ... आफ्नो अधिकारको दावी गर्ने र आउँदो पुस्ताका लागि उभिने जनताको संघर्षमा ... हामी नयाँ आन्दोलनको सुरुवात देख्छौं।
यो आन्दोलनले असमानता र विभाजनलाई अस्वीकार गर्दछ र युवा, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, शहर, क्षेत्र र अन्यलाई शान्ति, हाम्रो ग्रह, न्याय र सबैको लागि मानव अधिकारको नीतिहरु पछाडि एकीकृत गर्दछ। यसले पहिले नै फरक पार्दै छ।
अब विश्वव्यापी नेताहरूले निर्णय गर्ने समय आएको छ।
के हामी अराजकता, विभाजन र असमानताको पासोमा पर्नेछौं?
वा हामी विगतको गल्तीहरू सच्याउन र सबैको भलाइको लागि सँगै अगाडि बढ्ने छौं?
हामी ब्रेकिंग प्वाइन्टमा छौं। तर हामीलाई थाहा छ कि हामी इतिहासको कुन पक्षमा छौं।
एकीकृत शान्ति शिक्षा सामग्री सहितको ग्लोबल पाठ्यक्रम समयको आवश्यकता हो (भारत)
लुइसभिल, केन्टकीको शान्ति शिक्षा कार्यक्रम: हिंसाबिना विवादहरू ब्यवस्थापन गर्न युवाहरूलाई सिकाउँदै
अफ्रिकामा शान्ति निर्माणको लागि शिक्षाको शक्ति
जुन 1, 2016 समाचार र हाइलाइटहरू 0
शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु अफ्रिकामा द्वन्द्व र अस्थिरताको जड कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण छ, सरोकारवालाहरूले आज अदिस अबाबास्थित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन केन्द्रमा शिक्षा, लचिलोपन र सामाजिक एकता सम्बन्धी पान अफ्रिकी सम्मेलन अगाडि भने।
तीन दिने कार्यक्रम युनिसेफको पीस निर्माण, शिक्षा र वकालत कार्यक्रम (PBEA), र अफ्रीका शिक्षा को विकास संघ (एडीईए) द्वारा स्थापित, शान्ति शिक्षा मा अन्तर-देश गुणवत्ता नोड (आईसीक्यूएन) को प्रमाण र सबै भन्दा राम्रो अभ्यास साझा गर्दछ। । [पढ्न जारी राख्नुहोस् ...]
"पृथ्वीको युवा च्याम्पियन" बन्नको लागि आवेदन दिनुहोस्
23 सक्छ, 2017 कार्य चेतावनी, युवा केन्द्रित 1
यंग च्याम्पियन्स अफ द अर्थ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम र कोभेस्ट्रोको एक कार्यक्रम, एक अग्रगामी पुरस्कार हो जुन तेजस्वी युवा पर्यावरणविद्हरूको महत्वाकांक्षामा जीवनलाई सास दिन तयार पारिएको हो। प्रत्येक वर्ष, छ वटा युवाहरू - प्रत्येक विश्वव्यापी क्षेत्रबाट एक - लाई पृथ्वीको युवा च्याम्पियन्स नाम दिइनेछ। यी विजेताहरूले बीउड कोष, गहन प्रशिक्षण, र अनुरूप सल्लाहकार प्राप्त गर्छन् जसले उनीहरूका ठूला वातावरणीय विचारहरूलाई जीवनमा ल्याउँदछन्। आवेदन अन्तिम मिति: जून १,, २०१।। [पढ्न जारी राख्नुहोस् ...]